Baro Baasuukaha Mareykanka ee daran & xoog badan - Taranka
Mid ka mid ah noocyada cajiibka ah ee halkaas ka jira ayaa leh ilaaliye cabsi gelin ah oo la yiraahdo Bandogge Mareykan / Bandog .
Sidoo kale loo yaqaan American Bandogge Mastiff, American Mastiff, Swinford Bandog, MastiBull, ama American Masti-Bull , bakooradani waa mid ka mid ah khamaaristaadii ugu fiicneyd ee lagaa cabsi geliyey kuwa soo xadgudbay.
La kulan Bandogge Mareykan ah
Laakiin ha ku dhicin oo si dhakhso leh u iibso Bandogge. Miyaad u malaynaysaa inaad haysato waxa ay ku qaadanayso mulkiilaheeda? Sii wad akhriska si aad u ogaato.
Bandog ma la mid yahay Dibi Dibi?
Sidee Bandogge u eg yahay?
Bandogs ma halis baa?
Daryeelka fido weyn
Mudo intee le'eg ayay Bandogge Mastiffs nool yihiin?
Iibsiga eey: Bandogs ma sharci darro baa?
Xukunka: Bandogge-ka Mareykanka waa bahal cabsi badan
Maya, maahan. Bandogges waa hodgepodges oo shaqeynaya iyo ilaalin taranka . Waxay leeyihiin taariikh dheer oo sooyaal ah 1200naadkii waxaana la sheegaa inay ka yimaadeen Yurub, halkaas oo ilaaliyayaashu ugaarsi iyo dagaal ugu isticmaali jireen.
Xaqiiqdii, 'Bandog' waa erey Ingiriis duug ah oo macnihiisu yahay 'silsilad.' Ereygu wuxuu ka mid noqday magaca kooxdan, maaddaama qaar badan oo Bandogges ka mid ah lagu xiray silsilado maalintii oo la sii daayay habeenkii si loo ilaaliyo sababaha.
Hore u soco dhowr qarni kadib 1960-yadii , markii John Swinford, dhakhtar xoolaha ah oo Mareykan ah, uu isku dayay inuu jaangooyo nooca.
Wuxuu ka gudbay Maraakiibta Mareykanka ee loo yaqaan 'Bull Bull Terrier' oo uu weheliyo 'Naapolitan Mastiff'. Hadafka - in la abuuro eyga ilaaliyaha ah ee ugu dambeeya .
Bandogges-ka casriga ahi wuxuu noqon karaa isku-darka dhowr xarigood oo Molosser ah, oo ay ku jiraan:
Mastiff ( Ingiriis ama Neapolitan )
Isku dayga inaad la timaado magac caan ah oo ka kooban dhammaan fursadahaani waa dagaal lumis ah. Taabadalkeed, 'American Bandogge' waa eray dallad catchall ah oo loola jeedo isku-darka mid ka mid ah noocyadan .
Iyadoo aan loo eegin hiddo-wadaha gaarka ah ee Bandog, waxay damaanad qaadayaan inay noqdaan a weyn , xakamaynta bakooradda .
Waxay leeyihiin sumcad xumo waxaana loo adeegsadaa dagaalada meelo ka mid ah Mareykanka, laakiin runtu waxay tahay Masti-Bull oo leh milkiilaha saxda ah noqon karaa wehel jilicsan, wehel jecel .
Waxaad u maleyneysay in noocyada kala-sooc ee caadiga ahi ahaayeen kuwo aan la saadaalin karin? Bandogge-ka Mareykanka ayaa qaadanaya keegga. Waxaa jira ku dhowaad ma dhici karto si loo go'aamiyo sida ay u eegi doonaan iyaga oo aan la kulmin.
Dufanka MastiBull wuxuu ka koobnaan karaa tiro midabyo ah. Kuwa ugu badan ayaa ah bir, buluug ama meeris, fawn, casaan, dahab, iyo madow. Kuwa ay jaakado gaagaaban had iyo jeer waxay leeyihiin taabasho cad oo isku dhafan, laakiin qaabka saxda ah ayaa gebi ahaanba aan kala sooc lahayn.
In kasta oo astaamo gaar ah aan macquul ahayn in la sii saadaaliyo, dhismaha Mastiff ee Mareykanka guud ahaan qaab dhismeedkiisu waa hubaal.
Waxay u muuqdaan inay leeyihiin si fiican u dheellitiran, meydad afargeesle ah . KU xabadka oo qulqulaya iyo garbaha ballaaran sii kooxda Bandog joogitaan xoog leh.
Dhegahoodu saddex-geesoodka ah waxay ku fadhiistaan ​​madaxa madaxa feedhka ah, sankooduna wuxuu noqon karaa madow ama casaan, oo leh indho ballaadhan oo madow. Geesta kale, dabada caatada ah ee MastiBull ayaa hal dhibic taabanaya.
Cabir: Immisa ayey le'eg yihiin Mastiffs-ka Mareykanka ee Bandogge?
Bandogs waa aad u weyn Ragga guud ahaan waxay miisaamaan xoqitaan 100 ilaa 140 rodol (45 ilaa 64 kg) oo istaag 19 ilaa 30 inji (48 ilaa 76 cm) dheer.
Dumarku aad ugama gaabnaadaan ragga, laakiin way jilicsan yihiin, miisaankooduna waa celcelis ahaan 85 ilaa 100 rodol (39 ilaa 45 kg).
In kasta oo ay yihiin nooca eygu XXL, Bandogges ku qanacsanaanta guryaha ama guryaha yaryar , laakiin waa keliya haddii si ku habboon loo jimicsado.
Ka fikir Mastiff Mareykan ah nooca kaneecada ee Dr. Jekyll iyo Mr. Hyde. Qoysaskooda, eeyahaani waa kuwo jilicsan oo naxariis badan. Kuwa shisheeyaha ah iyo hanjabaadaha iman kara, waa kuwo si xun u xun .
Dabeecadoodu way isbeddeli kartaa isla markiiba haddii ay dareemaan wax shaki ah.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad la yaabto inaad ogaato in Bandogges yihiin weyn leh carruurta ay ugu wacan tahay ilaalinimadooda, dabeecaddooda dareenka leh. Waxaa loo yaqaanaa xoogaa daryeel ilaaliye ah, iyagoo kasbaday naaneysyo sida 'Mama Bear' iyo 'Aamusnaanta Nabadda.'
Sida jilicsan sida Bandog-gaagu isku dayi karo inuu noqdo, iyagu iskama dhigi karaan kuwo yaryar. Baaxaddooda ballaaran waxay kordhinaysaa caqabadaha taas waxaa laga yaabaa inay carruurta dhaawacmaan inta lagu jiro ciyaarta.
Waxaa ugu wanaagsan in la kormeero isdhexgalkaan oo la baro carruurta yaryar sida loo daaweeyo fido weyn si looga fogaado shilalka.
MastiBulls badanaa waxay la jaanqaadaan xayawaannada kale - haddii si wada jir ah loo soo wada kiciyo oo si habboon loola dhaqmo. Halkan ka daawo muuqaalkan sharafta leh ee Bandogges-ka Mareykanka!
Laakiin ha fileynin Bandog-gaagu inuu saaxiibtinnimo la leeyahay aadane ama xayawaan rabaayado ah.
Hal ku dhigga doggo waa ' marka hore qaniino, su'aalahana weydii marka dambe . ” Loogu talagalay ilaalinta iyo difaaca, waa dhul iyo geesinimo . Si fudud ugama laaban, mana ka waaban doonaan inay ku dhaqaaqaan hanjabaad.
Bandogges-ka Mareykanka ayaa caan ku ah dayaca qaybta jilifta ee 'jilif iyo xajin.' Xaqiiqdii, eeyahaas wax badan ha cixin . Si kale haddii loo dhigo, ma jiri karaan digniin ka hor inta aysan weerarin.
Tani daruuri maahan khalad dhankooda ah. Eeyaha ilaalada ah waa inay awoodaan inay ku fikiraan cagahooda, ka dib dhan. Waxay macnaheedu tahay, in kastoo, taasi milkiilayaasha laylisyada ah waa inay ka fogaadaan tarankaan .
Workaholics waxaa laga yaabaa inay rabaan inay dib uga fiirsadaan helitaanka canine-kan, sidoo kale. Bandogges waxay magacooda ka helaan in silsilado lagu xidho maalintii oo dhan, laakiin xaqiiqadu waxay tahay in noocani ka fog yahay keli ahaanta.
Xayawaankaaga xayawaanka gardarrada ah ama wax u dhimaya ayaa ka sii dari kara haddii uu keligiis iska tago marar badan.
Sida loo maareeyo Bandogge Mastiff Mareykan ah
Bandogs waa kuwo caqli badan oo caqli badan, laakiin rabitaankooda ah inay ku farxaan waxay u dhexeeyaan 'gebi ahaanba docile' illaa 'alfa xukuma.'
Marka la fiiriyo cabirkooda iyo dareenkooda difaaca, iyagu u baahan halyeey milkiile ey ah . Iyadoo aan lahayn tababar iyo maarayn habboon, jaranjaradaasi waxay noqon karaan kuwo dagaal badan oo ay adag tahay in la xakameeyo.
Waxay jecel yihiin fiiro gaar ah laakiin waxay u baahan yihiin amar . Isticmaal xoojin togan si aad uga faa'iideysato tan. Marka ay tahay in ardaygaagu kasbado daweeyo iyo waqtiga ciyaarta, wuxuu noqon doonaa mid aad u dhiirigeliya inuu ka fikiro akhlaaqdiisa.
Ka fogow tababbarka xoogga leh . Waxa ugu dambeeya ee aad rabto waa inaad baraysaa eygaaga inuu ka walwalo ama ka baqo adiga iyo aadanaha kale.
Markii si sax ah loo dhammeeyo, tababarka MastiBull wuxuu marin doonaa awooda taranka wuxuuna xoojin doonaa booskaaga sida eyga sare.
Fasallada adeecida eeyaha waxay gacan ka geysan karaan inay aasaas wanaagsan u dhigaan dhalinyaro yar yar oo loo yaqaan 'Bandogge', waxayna ku bilaabi doontaa is dhexgalka bulshada lugta midig.
Markasta oo Hercules-yadaada afarta lugood ay korayso, waxaad eegi kartaa xeelado tababar oo aad u daran. Iyada oo ay shaqeynayaan oo ay ilaalinayaan hiddo-wadaha, noocani wuxuu ku fiicanyahay jiidista culeyska, dabagalka, shaqada booliska, iyo xitaa tababarka daaweynta !
Fiiri fiidiyowgan Bandogge Mareykan ah oo ka shaqeynaya tababarka ilaalinta. Kaliya maahan inuu ku dhaqmayo wixii loo soo saaray inuu sameeyo, laakiin sidoo kale wuxuu si buuxda ula jaan qaadayaa ilaaliyaha waqtiga oo dhan.
Waxa ugu muhiimsan ee la xasuusto waa taas waxaad tahay hogaamiyaha xirmada . MastiBull-kaaga wuxuu u baahan yahay inuu kuu arko inaad tahay madaxa iyo aamin hogaamintaada. Badbaadada eeygaaga iyo dadka kugu hareeraysan ayaa ku tiirsan.
Way adkaan kartaa in la aamino, laakiin Dayactirka Masti-Bull ee Mareykanku ma ahan mid si aad ah u baahan .
Marka la barbardhigo waqtiga iyo tamarta oo dhan waxaad ku bixin doontaa tababarka, ilaalinta caafimaadkaaga Bandog iyo muuqaalkaagu waa socod ku yaal baarkinka.
Arooska: cadayashada iyo maydhashada Mastiff-kaaga Mareykanka
Bandogges waa daadiyayaal dhexdhexaad ah . Isticmaal burush caag ah, sida a gacmo gashi , 2 ilaa 3 jeer usbuucii si looga saaro dhogorta dabacsan ama dhimatay. Ku tirtir maro nadiif ah si aad runtii u soo saarto dhalaalka jaakadooda.
Eeyadan ayaa kala ah lagu yaqaan inay hoos udhacaan oo wax yar uriyaan laakiin iska caabi rabitaanka ah inaad qubayskaaga badiyaa aad u badato.
Haddii Bandogagu leeyahay laalaab, isticmaal a tirtir eyga ama maro qoyan si uu ugu nadiifiyo inta u dhexeysa maqaarkiisa. Waxay ka caawin kartaa inay siiso caraf udgoon oo aad u wanaagsan iyada oo aan qallajin dhogortiisa.
Goobaha ciddiyaha ayaa dhici kara bil kasta ama wax kale, laakiin maalin kasta daryeelka ilkaha waa fiican. Haddii aad isugu soo dhowaato oo shaqsi ahaato daan aan weyneyn koobki shaahaaga, qorsheyso inaad cadayato ilkahooda hal mar ama laba jeer usbuucii, uguyaraan.
Kahor intaanan u gudbin quudinta Bandog-gaaga, waa inaan xusno qurxintaas runti u baahan in lagu soo bandhigo eey.
Illaa aad rabto 100-rodol oo eey ah oo ordaya amok inta lagu jiro wakhtiga qubeyska ama haraatiga ku garaacayo ciddiyaha, taasi waa.
Haysashada calooshaada Bandog
Eeyo waaweyn ayaa wax cuna wax badan . Mastiff-kaaga Mareykanka ayaa u baahan 4 ilaa 5 koob cuntada maalin kasta.
U kala qaado qadarkan laba cunto, oo u fiirso cunista degdegga ah maadaama ay taasi uga sii dari karto arrimaha caafimaadka. Fiiri fijaanyo qunyar-socod ah haddii MastiBull-kaaga uu hoos u xardho kibiskiisa.
Diyaaradan culus ayaa ah harraad badan iyo dhif in la cabbo biyo qulqulaya. Bixinta Bandog-gaaga biyo nadiif ah oo nadiif ah ayaa laga yaabaa inay dareemaan shaqo labaad, laakiin way qadarin doonaan dadaalkaaga.
Bandogges ma u baahan yihiin jimicsi badan?
Bandogge Mastiffs waa kuwo firfircoon. Uma baahna daarad weyn, laakiin waxay noqon karaan kuwo wax dumiya oo aan dhaqdhaqaaq joogto ah lahayn. Qorshee 45 daqiiqo ilaa 1 saac jimicsi maalinle ah si looga ilaaliyo inay nastaan.
Bandog-gaagu wuxuu ku raaxeysan doonaa inta badan hababka jimicsiga eey, laakiin waxaa laga yaabaa inaysan noqonin musharraxiin wanaagsan oo loogu talagalay jardiinooyinka eyga ama xannaanada carruurta.
Dhinacyadaas isla, kaliya u oggolow Bandog-gaaga inuu lugahooda ka fidiyo - haddii ay ku jiraan gudaha xayndaabka dheer ee eyga ah.
Tani ma aha nooca fido aad rabto inaad ku furto. Uma baahnid inaad masuul ka noqotid eeygaaga inuu dhaawacmo ama u dhaawaco qof kale.
Weli waxaa jira siyaabo fara badan oo MastiBulls ay u gubaan xoogaa xoog ah, sida dabaasha ama Ciyaaraha xujada ah . Hawlaha saamaynta yar-yar ee kuwan oo kale ah ayaa ku habboon inta lagu jiro puppy iyo gabowga marka isku-xirnaantaada Masti-Bull ay aad u nugul yihiin.
Warka kale ee wanaagsan ayaa ah in Bandogges ay jeclaan karaan oo ilaalin karaan qoyskaaga muddo dheer. Iyada oo celcelis ahaan cimriga qofka uu yahay 10 sano , waxay noqon doonaan wakhti yar.
Oo hadda, warka xun: sida ay u xoogan yihiin sida Bandogs yihiin, maaha kuwo aan laga adkaan karin. Guryahaas awooddu waxay ku wajahan yihiin arrimo caafimaad oo fara badan, oo laga hortegi karo iyo mid lama huraan ah.
Xaaladaha hidda-socodka ee Masti-Bull aad ka dhaxli karto waa tayroodh iswada , kansarrada, suuxdinta, cudurada indhaha, sida atrophy retinal horumarka, sinta iyo xusulka dysplasia, dhibaatooyinka maqaarka.
Cudur kale oo caadi ah ayaa ah buro ama fiditaan caloosha-volvulus . Waxay u egtahay walaaca caafimaad ee ugu liita liistadan, laakiin dhab ahaantii waa halis nolosha. Waxay soo baxdaa marka eeygaagu leeyahay gaas aad u badan oo caloosha ku jira.
Tani waxay sababi kartaa in caloosha ay maroojiso oo ay joojiso bixinta dhiigga ee xubnaha muhiimka ah.
Waxay u baahan tahay daryeel caafimaad oo degdeg ah, sidaa darteed baro calaamadaha oo diyaar u ahaaw inaad si dhakhso leh wax uga qabato haddii aad ka shakisan tahay in MastiBull-kaaga uu la xanuunsanayo xaaladdan.
Bandogges, oo ay weheliyaan walaalahooda kale ee Mastiff, ayaa leh dulqaad xanuun badan , sidaa darteed waxaa laga yaabaa inaadan isla markiiba ogaan haddii ay wax yeelaan ama ay dareemaan fiicnaan.
Sida ugu wanaagsan ee aad u garaneyso eeygaaga shaqsiyaddiisa iyo dabeecaddiisa, ayaa sida ugu wanaagsan ee aad awood u yeelan karto inaad u sheegto markii ay wax jiraan.
Sidoo kale qaado talaabooyin ka hortag ah, sida inaad maqaarkooda nadiif ahaato oo qalajiso oo aad u ogolaato inay cuntada nastaan ​​ama jimicsi ka dib. La soco booqashooyinka dhakhaatiirta joogtada ah, iyo sidoo kale qalbi-xanuun , boodada, iyo daaweynta shilinta.
Sida eeyaha kale Molosser, American Bandogge waa a nooc muran leh . Waxay yihiin badanaa loo arko dagaal iyo xasillooni darro , taasoo horseedaysa meelaha qaarkood in gebi ahaanba laga mamnuuco.
Romania, Switzerland, iyo qaybo ka mid ah Mareykanka ayaa leh la mamnuucay Lahaanshaha MastiBull Intaa waxaa sii dheer, qaar ka mid ah dhismooyinka guryaha ama HOAs ayaa mamnuucay mamnuucitaan meel kaa mamnuucaya inaad ku haysato Bandog dhismaha.
Haddii aad samaysay cilmi-baarista oo aad si sharci ah u lahaan karto Bandog Mastiff aaggaaga, waa waqtigii aad bilaabi lahayd keydinta. Qiimaha eey yar yar oo Mareykan ah oo loo yaqaan 'Bandogge puppy' ayaa kor u kici kara inta ugu badan $ 2500 .
Ma xiiseyneyso inaad duqeyso lacagtan badan? Waxaad markasta badbaadin kartaa Masti-Bull. Helitaanka mid si loo korsado ayaa laga yaabaa inay ka fududdahay sidaad moodeysid.
Kalkaaliyeyaasha American Bandogge
Caadi ahaan, markay dadku dhex maraan kuwa sameeya ama aqalada, waxay yaqaanaan abtiriskooda. Iibsashada Bandog waa khibrad gaar ah, in kastoo.
Sababtoo ah noocyo badan ayaa ka koobnaan kara Bandogge Mareykan ah, isku dayaya inaad ogaatid khadka saxda ah ee ilmahaaga suurta gal maaha .
La kulan Bagheera, Bandog - Isha sawirka
Aqallada ugu badan isku dar 2 ilaa 3 nooc inay abuuraan noocooda gaarka ah ee American Bandogge Mastiff.
Waa inay awoodaan inay ku bartaan hooyadaa iyo aabahaaga Masti-Bull laakiin ha la yaabin haddii ay macluumaad kooban ka hayaan jiilalkii hore.
Xitaa haddii MastiBull uu leeyahay geed qoys oo qarsoodi ah, aqallada masuulka ka ah waa inay ku siiyaan dammaanad qaad caafimaad ilmahaaga Bandog iyo waalidkiis.
By habka, diiwaanada caafimaadka ama shahaadooyinka waa isku mid maahan sida baaritaanka caafimaadka xoolaha.
Waxaad dooneysaa caddeyn muujineysa in eeygaaga, iyo qoyskiisa kaniisadda degdegga ah, aysan wadin xaalado caafimaad oo daran.
Booqashooyinka Vet waa lama huraan, laakiin MA ahan bedel lagu baaro cudurada hidaha.
Waxa kale oo aad u baahan doontaa inaad weydiisato soosaarayaasha suurtagalka ah ee ku saabsan waxa ay sameeyaan si ay u dhexgalaan qashin cusub.
Sida ugu dhakhsaha badan ee ay awoodaan, eeyooyinka yaryar ee loo yaqaan 'Bandog puppy' waa in lagu soo bandhigaa aragtiyo cusub, codad, iyo ur. Fikrad ahaan, howshan ayaa bilaaban doonta ka hor ardaygaagu wuu kula soo guurayaa waana inuu sii wadaa noloshooda oo dhan.
Marka, halkee ka iibsan kartaa Bandogge Mareykan ah? Waa kuwan wax soosaarayayaal yar si ay ugu boodaan raadintaada:
Sentinel Mareykan K9 (Jackson, MS)
Aqoonyahan K9 (Franklinton, NC)
Blasco Qoyska Bulldogs (WAA MAXAY)
Waxaad sidoo kale baari kartaa boggaga Facebook, sida West Coast Bandog Mastiffs Nevada, si loo arko haddii ay haystaan ​​eeyo yaryar oo American Bandogge ah oo iib ah.
Samatabbixinta Bandogge Mareykan ah
Qof kastaa ma maamuli karo Bandogs iyo ilma adeerradooda Molosser. Nasiib darro, markay dadku wax ka qaniinto wax ka badan inta ay calali karaan, noocyada xoogga leh ee kuwan oo kale ah waxay ku dambayn karaan hoyga ama samatabbixinta.
Mararka qaarkood, dabeecadda eygu wuxuu caddeeyaa inuu aad u badan yahay. Xaaladaha kale, mas'uuliyadda dhaqaale waxay noqotaa mid aan la awoodi karin.
Haddii aad doorato inaad korsato, diyaar u noqo inaad waxyar ka shaqeyso si aad u tababarto MastiBull la soo badbaadiyay oo aad u hesho kalsoonideeda . La'aanta tababar habboon ama naxdin ku saabsan dhiibistii waxay ka sii dari kartaa taxaddarrada, astaamaha difaaca.
Hoyga maxalliga ah waxay ku badan yihiin noocyo la mid ah Bandogge Mastiff. Kuwani waa ikhtiyaarro aad u fiican haddii aadan ku qanacsanayn nooca Bandog ee aad hesho.
Haddii aad rabto inaad ugu dhowaato Masti-Bull dhab ah oo Mareykan ah intii suurtagal ah, cilmi baaris ku samee xarumaha carruurta korsada ee Molosser, sida kuwan:
Mastiffs Mutts (Chambersburg, PA)
Saldhigga Bullpen Way & Sanctuary (Norwood, GA)
Waxaana jira ururo, sida The Ururka Bullmastiff ee Mareykanka , Taasi waxay fiirineysaa bakhaarradan illaa ay ka helayaan milkiile cusub.
Bandogge Mastiff-ka Mareykanka waa xashiishka weyn ee sida ugu wanaagsan loo maareeyo milkiilayaasha khibrada leh oo keliya . Dhinacooda jilicsan, ee dareenka leh ayaa loogu talagalay kaliya xubnaha xirmooyinka, qof kasta oo kale waxaa lala kulmaa a ilaaliye aan cabsi lahayn .
KU run eeyaha alfa , Masti-Bulls uma jawaabi doono hogaamiye aan go'aan qaadan. Waa inaad kasbataa ixtiraamkan isweydaarsiga. Loolanka
Miyaad u aragtaa Bandogge-ka Mareykanka cabsi gelin ama xiiso leh? Malaha labadaba? Noo sheeg sababta faallooyinka!
Shepard Jarmal badh shaybaar
chihuahua iyo shih tzu isku darka
adhijir Jarmal caddaan iyo bunni
sida loo xidho suunka eyga oo sawiro leh
eyga qallayl saacado badan